Powoluminescent Powder ee loogu talagalay Biyo ku Salaysan Biyaha Warshadda Rinjiga Madoow iyo soosaarayaasha | Grand Luminous
Midabka Photoluminescent ee iftiinka midabka mugdiga ah: Iftiimin biyo-kama-dhibcaan ah oo kudhisan budada mugdiga ah ayaa loo diyaariyey isticmaalka rinjiga ku-saleysan biyaha, waxay leeyihiin cabbirka unugyada ku habboon ee sameynta rinjiga iyo biyo-u-adkeysiga, waxay leeyihiin astaamaha soosocda: Nidaamka biyaha-biyaha ee waxa ku saleysan cabirka, biyaha adkaysiga adag. Cabbirka walxaha la isticmaali karo ee faafitaanka wanaagsan ee rinjiga. Habka loo adeegsado sameynta rinjiga.Nabad-sun ah iyo waxyeello lahayn.Kulan-cagaar, buluug-cagaaran, cirka-buluug iwm
Midabka Photoluminescent ee iftiinka midabka madow:
Biyo-xidhka biyuhu ka samaysan yihiin ee budada mugdiga ah waxaa loo habeeyey isticmaalka rinjiga ku saleysan biyaha, waxay leeyihiin cabbirka unugyada ku habboon ee sameynta rinjiga iyo biyaha u adkeysan kara, waxay leeyihiin astaamaha soosocda: Nidaamka biyaha-biyaha ee loogu talagalay waxa rinjiga ku saleysan, biyo-celin adag oo deggan. iftiinka wanaagsan ee rinjiga .Siqaawiyaha habka loo sameeyo rinjigaNa-sun ah iyo dhib la'aan.Doog cagaaran, buluug-cagaar, cirka-buluug iwm budada aluminiinka ee aluminiumka ah ayaa iftiin u noqonaysa nuugista nalalka kala duwan ee la arki karo oo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Alaabadaani kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo muuqata sida daahan, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaarayaasha. midabkeeda dabiiciga ah meelaha meelaha iftiinka leh wuxuuna soo saaraa midabbo kala duwan oo nalal mugdi ah. Waxaa loo isticmaali karaa iftiinka deg degga ah, calaamadaha muujinta iyo qurxinta.
Foomka kiimikada: SrMgAl4O8: Eu2 + Dy 3+ Sifooyinka:
1. Midabka sawirka-luminescent-ka wuxuu leeyahay astaamaha iftiinka sare iyo muddada. (Tusaale ahaan: DIN 67510 ayaa dhalaali karta 10000 daqiiqo).
1. Xogta kor ku xusan ee farsamada waxaa lagu helay iyadoo la raacayo imtixaanka iyada oo la raacayo habka 'DIN6 7510' Qaybta I;
2. Waqtiga iftiinka kadib waxaa loola jeedaa waqtiga ay ku qaadaneyso nalka inuu ku yaraado 0.32 mcd / m2 waqtiga
Shayga No:: rinjiga iftiinka Photoluminescent-ka biyaha nadiifinta ee rinjiga ku saleysan waxa rinjiga ku saleysan
adkeysiga biyaha ee xasiloonida ku habboon cabirka walxaha ku habboon kala firidhsan ee hannaanka ranjiyeynta loogu talagalay sameynta rinjiga Non-toxi